Enweela ụfọdụ oghere ndị dị oke egwu dị na ụlọ ọrụ na-ebelata ndị otu na-enwebeghị mmeri. Mkpesa sitere na azụmaahịa jiri Groupon na LivingSocial arụtụ aka n'ọtụtụ okwu: Mbelata ego achọrọ dị oke nkpa na ọ na-ewute azụmahịa. Paymentkwụ ụgwọ ahụ na mbelata anaghị abịa ozugbo, na-akpata oke nsogbu cashflow nke liela ụfọdụ azụmaahịa. Ndị na-azụ ahịa ha na-adọta bụ maka naanị ihe pụrụ iche ma ghara ịlaghachi. Ndị ụlọ ọrụ na-eme ihe ike
Ndị folks na G + (ka aghara ịdị mgbagwoju anya na Google) ewepụtala ozi a na usoro teknụzụ kachasị elu nke ntanetị maka afọ 2011. Edebere ndepụta a na Group Buying, teknụzụ nke gbawara na mbụ n'afọ ma bụrụzie akụkụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obodo ọ bụla depụtaghachiwo ma tinye ya na atụmatụ ha. Ngwa Geolocation, mbadamba, ngwa ọrụ na-arụpụta igwe ojii, vidio n'ịntanetị na Enterprise, Online Q&A (gụnyere ndị ahịa anyị na ChaCha!), Crowdfunding, na Mobile